PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-09-19 - Ibon­dene eLuthela ku­miswa abanye aba­holi
Ibon­dene eLuthela ku­miswa abanye aba­holi
Eyethu Baywatch - 2018-09-19 - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu An­other Lutheran Church se­nior leader sus­pended
KUBUKEKA zisekude ukuphela izinkinga ezikhungethe ibandla lamaLuthela, njen­goba sekuphinde kwamiswa omunye waba­holi balo.
UMongameli Jo­han Ndlovu, obe­hola iSekethe laseM­pan­geni, usenikwe in­cwadi eqinisek­isa uku­miswa kwakhe kuyo yonke imisebenzi yalelibandla.
Encwa­dini ayitho­lile ngesonto eled­lule, ebivela ekomkhulu lebandla eliseM­phu­mulo, ikubeke kwa­caca ukuthi ku­zomele abuyise zonke iz­into zokusebenza ze­bandla.
Eziphen­d­ulela uM­fun­disi uNdlovu, ukhale kakhulu ngendlela ok­wen­zeke ngayo, njen­goba ekhishwe ngencwadi yesi­gungu se­bandla, esikhundleni sokuba akhishwe yi-Dio­cese nomkhandlu.
‘Kwiz­iza­thu ez­ibekwe phezulu, bakhale ngomkhandlu weSekethe laseM­pan­geni, abathi wap­haz­a­misa uku­lalelwa kod­aba lwami noM­fun­disi uBiyela kanye nokuphatha kukaMongameli ukhetho lwaseM­pan­geni South, nokuthiwa kwak­u­fanele luphathwe nguM­fun­disi uBiyela.
‘Lencwadi iyakhom­bisa ukuthi ay­ib­hal­wanga nga­bantu abafanele,’ kuc­haza uNdlovu. Omunye wabamiswe kanye naye uMnuz Bonginkosi Biyela, naye ukhale ez­i­math­onsi ngokubu­lawa kom­sebenzi we­bandla, nokuphen­dulwa inhlek­isa kwe­bandla ezweni.
Uthe bona bazo­qhubeka nok­wenza imisebenzi yebandla, naphezu kwa­lencwadi ebamisayo.
Kubukeka kun­gasekho kahle ukuthula noz­inzo ku­lolud­aba lwalelibandla, es­eliphen­duke um­n­qak­iswano wezikhundla, njen­goba kukhona aba­solwa ngokuba ngondlovu kayiphen­dulwa, abanye ba­solwa ngokuphen­dula ibandla iqembu lezepoli­tiki.
Kwakusa­hamba kahle lapha, njen­goba kubonakala uMongameli Jo­han Ndlovu kwe­sobunx­ele owayethula uM­fun­disi Lan­gelihle Biyela